Dia sanatria ve ho Solon-kibombahoaka ?
Nafana tokoa ny fihetsiketsehana nataon’ireo Kandidà ho Solom-bavambahoakan’i Madagasikara raha nanao fampielezan-kevitra izy ireo, tamin’izany fotoana izany. Ny tao Antananarivo moa dia nandeha ho azy mihitsy satria toa Mpanakanto ,fa tsy mpanao paolitika akory, ny ankamaroan’ireo nirotsaka ho fidiana. Tsy ho tanisaina satria mety ahamonamon’aina.
Ireo kandidà hafa tsy mahay « gala de chant » tamin’izany kosa moa dia nanovokovoka tokoa tamin’ny ZUMBA na tamin’ny adin’akoho, na tamin’ny « course alika », na koa tamin’ny fizarana vola, mba hamoriana vahoaka.
Zavatra tokana sy mafonja no nampanantenain’ny Kandidà tsirairay tamin’izany raha toa ka voafidy izy ireo : FAMPANDROSOANA AN’I MADAGASIKARA amin’ny alalan’ny FANOMPOANA VAHOAKA.
« Ianareo vahoaka no laharam-pahamehana », hoy ry zalahy « … ka ny feonareo no feonay, raha mifidy anay ianareo. Ataonay vain-dohan-draharaha ny hialànareo ao antin’ny fahantrana. Tsy maintsy miova mantsy ny fitantanana mba ho voazara amin’ny rariny amin’izay ny harem-pirenena : tany, vatosoa, hazan-drano , hazo lafo vidy. Fananam-pirenena ireo. Izany hoe fanananareo. Koa fidio izahay fa hisava ny rahona mananontanona , àry ho manga amin’izay ny lanitrareo ».
( Saika latsaka ho’aho ny ranomasoko ka mody novonjeko nofafaina haingana aloha ny leloko.)
Efa volana maro izay no nahalany ireto « Mpamonjy ny Firenena ». Asa na efa nisy raharaha natomboka ! Asa raha efa nisy feom-bahoaka nakarina ! Asa raha efa nisy tetikasa sy traikefa voavolavola momba ny Fampiadanam-bahoaka sy ny fanalana azy ireo amin’ny fahantrana…
Kôzy ve ?
FA ny malaza aloha izao dia hoe misy fifandirana eo anatrehan’ireo ao Tsimbazaza ( tsy Sokatra na gidro ireo , azafady an !), sy ny Governemanta ( tsy mbola « nahamasaka » aloha hatreto). Tsy faly ireto Olom-boafidy fa tara ny karamany . Etsy an-kilany , milaza ihany koa ireto MAHERY FO fa mila asondrotra izany, satria ambany loatra miohatra amin’ny an-dry zalahy teo alohany. Ankoatra ny karama sy fiantohana samihafa dia mitaky FIARA lafo vidy ( satria hono matanjaka ) koa ry zareo.
NA GOVERNEMANTA, NA ANTENIMIERA
Tsy hitora-bato anareo na hitoraka bilao, fa raha nandre ny kabary fampanantenana ny VALALABEMANDRY, dia nieritreritra mihitsy fa amin’ny FO MADIO àry zara raha misy tambiny no iadianareo ho AZY . Noheveriny fa AM-PANETRENTENA tokoa no hampiasanareo ny talenta sy ny fahaizanareo rehefa lany ianareo !
Na FILOHAM-PIRENENA na SOLOM-BAVAMBAHOAKA dia vofidim-bahoaka avokoa àry VELOMIM-BAHOAKA rahateo.
Noho izany, aoka tsy haverina intsony izay hadisoana vitan’ireo ( izay nihinana teo aloha) nialoha, fa mba ataovy izay ahatsapanareo ny hirifiry mahazo ny vahoaka dia SOLOY VAVA tokoa ry zareo satria tsy
Asa anefa aloha an! Amereno ariary aho raha misy madinika any aminao !